शुभकामना, योगेश दाइ ! – Online Marg
Posted on Tuesday, August 6th, 2019 2:05 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
नेपालको राजनीति ,यसमा हुने उतार चढाव तथा दानवीकरण र देवत्वकरणका वारेमा म भन्दा जानकार पक्कै पनि योगेश दाइ नै हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले यहाँ विस्तारित गरेका सुझाव वहाँका लागि सामान्य सुझाव मात्रै होलान तर वहाँले मन्त्री पदको सपथ गर्दै गर्दा रंगिएको सामाजिक संञ्जालहरुले के देखाएको छ भने पक्ष विपक्ष केहि नभनी वहाँ “साझानेता” को रुपमा उदयीमान हुनुहुन्छ । हाल सम्म दिने ठाउमा नरहनु भएकाले पनि हुन सक्छ मानिसहरु तपाइको विरुद्धमा चर्किन पाएका छैनन। त्यसैले अव दिने ठाऊमा हुनु भए पछि अझ बढी संयमित हुन आग्रह गर्न चाहान्छु ।
सामाजिक सञ्जालमा आफुले कुनै कुनै मौकामा तपाई सँगको भेटमा लिएका तस्विर सहितका फोटोहरुले तपाईलाई वधाई दिई रहेका ती तमाम हालका समर्थकहरु अव कुनै नाता साईनो चिनजान जगाउदै तपाईसँग आफ्ना स्वर्थ साट्न आउने नै छन ।
राजनैतिक व्यक्तित्व तपाई उनिहरु संग टाढै वस्नु भनेर त सुझाव दिन त मिल्दैन तर उनीहरुसँग केही न केही रुपमा तपाई सजग भने हुनुनै पर्छ । किनकी भोली उनीहरुको स्वर्थ सिद्ध नहुने वित्तिकै उनीहरु लगायतका झुण्ड ले समुह वनाएर तपाई माथि प्रहार गर्न पछि पर्ने छैनन् ।
मैले के भन्न खोजेको हु भने म जस्ता पात्रहरु जो हाल फोटो सहितले बधाई दिन तल्लिन हुदै छन तिनिहरु भोली घर पछाडीको देवी थानमा मन्दिर निर्माणको लागि पाँचलाख, जंगल भित्र शनिश्चरे पुजा गर्नका निमित्त दुईलाख, प्याराग्लाइडिङ्गको सर्वेक्षणको लागि घर छेउको डाडो उपयुक्त देखिएकाले १० लाख भन्दै आउने छन अनि तपाईले उनीहरुलाई निराश गराउनु भयो भने उनीहरुले नै अव तपाइलाइ हिलो छ्याप्न शुरु गर्नेछन। त्यसैले यस्ता पात्रहरु सँग तपाइ सबै भन्दा बढी सचेत रहनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु।
अनि अर्कोथरी झुण्ड मिसन सहित लागेका हुन्छन। योगेशको छवि गिराउन पाएमा अन्तरपार्टी र बाह्रय पार्टी पनि तपाई प्रतिको क्रेज घटाउन सकियोस भनेर। उनीहरुद्वारा पुर्वाग्रही नियोजित समाचार सम्प्रेषण हुन थाल्नेछन। तपाई काम भन्दा बढि ती समाचारका स्पष्टिकरणमा रुमल्लिनुहोस र तपाईलाई केहि पनि काम गर्न सक्ने होईन रहेछ, खपतका लागि मात्र बोल्ने रहेछ भनी साबित गराउन सकियोस भनेर । यस्ता प्रवृत्तिबाट म भन्दा बढि तपाईनै जानकार हुनुहोला ।
अर्को पाटो भनेको पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगम हो । यसमा जतिनै राम्रो काम गरेको भएतापनि
हाल चर्चामा रहेको वाइडवडि को बिषयमामा स्पष्ट रुपले बोल्न सक्नु भएन र बोलीमा लटरपटर भयो भने तपाई अन्य जति सुकै राम्रा काम गरे पनि यसलाई मात्र नियोजित समाचार बनाईने छ । भिडियो क्लिपहरु साामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यपती आउन थाल्नेछन ।
फोटोसप गरेका फोटोहरुले स्थान पाउन थाल्नेछन । जसरी तपाईका सहकर्मि स्वर्गिय रविन्द्र अधिकारीलाई गरिएको थियो । यी काममा सबैभन्दा क्रियाशील भएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने काम ती म जस्ता पात्र कै हुनेछ। त्यसैले तपाइलाइ फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, म जस्ता मेरो काम योगेशले गरिदिएन भन्ने पात्रहरुसँग धेरै चनाखो हुनुहोला। यीनीहरुलाइ चुनौतीको रुपमा लिइ आफ्नो कायम रहेको छबिमा दाग लाग्न नदिनु होला।
यी तमाम चुनौतीका पहाड बीच पनि तपाई संग भ्रमण वर्ष २०२०, नीजगढ विमानस्थल, पुराना थाती रहेका काम अघि बढाई आफुलाई अब्बल सावित गर्ने अवसर पनि छ ।
अवसरका बारेमा मैले खासै उल्लेख गरिन किनकी तपाई यस विषयमा अवश्य पनि म भन्दा बढि जानकार हुनुहुन्छ । यी माथि उल्लेखित तपाईका चुनौतीहरुलाई छिचोल्दै देशवासी जनताको हितमा काम गर्नुहोस र हाल कायम रहेको “साझानेता” को छबी कायमै रहोस। शुभकामना योगेश दाइ !
लेखक कुँवर सत्तारुढ नेकपा समर्थक विद्यार्थी संगठनका नेता हुन् ।
Posted in विचार/ब्लग मार्गTagged #शुभकामना, योगेश दाइ !